Umhlambi Woshukela emcabangweni wawo | Martech Zone
Herd Succumbs to theory yayo uqobo
NgeSonto, Novemba 4, 2007 NgoMsombuluko, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
Okuqukethwe kwami ​​kusayithi bekukhanya kancane emasontweni ambalwa edlule - kuzothathwa kungekudala. Bengisebenza kanzima kakhulu, ngikhuluma futhi ngisebenza ngenyanga edlule futhi kuthinta ibhulogi. Yize okuqukethwe kuphansi manje, ingqondo yami igijima nokuqukethwe emasontweni ambalwa ezayo, ngakho-ke qiniseka ukuthi uzonamathela kimi. Uma lokho kunganele, ngivale umxhasi wokugcina we- $ 1,000 Giveaway - Vontoo. Sisebenzela idemo enhle yeVontoo ngokuthunyelwe!
Kuleli sonto ngiqedile I-Herd, incwadi nge UMark Earl. Angiqiniseki ukuthi ngichithe isikhathi esiningi nencwadi kulo nyaka, kufundwa okumangazayo futhi ngingakuncoma kunoma yimuphi umkhangisi.
IMHO, Umhlambi may ube nesithombe sokuba incwadi ebaluleke kakhulu yebhizinisi engayifunda kulo nyaka - ngaphandle kokuthi ngicabanga ukuthi uMark unqotshwa eminye imibono neziphetho zakhe. UMark uchazwa ngejakhethi njengo
Omunye wabasebenza kwezokuxhumana abaphambili emhlabeni kanye nomcabangi oholayo mayelana nemikhiqizo, ukumaketha nokuziphatha kwabathengi.
Ekufundeni incwadi kaMark, ngithola obunye ubufakazi bokuthi uMark unombono wokungabaza inkolo ehleliwe kanye nezepolitiki ezinamalungelo. Lezi yizihloko ezimbili esicabanga ukuthi kufanele sizigweme ebhizinisini, kepha isihloko sikaMark sokushintsha isimilo esikhulu asikwazanga ukukhuluma ezihlokweni ezimbili ezifaniswe kakhulu nomhlambi. Esikhundleni sokuthinta ukujula ngakunye, uMark waphonsa amazwana ambalwa futhi washiya lokho. Uma ngikhuluma iqiniso, ngibe nesikhathi esinzima ukugaya yonke incwadi ngenxa yalokhu. Lokho kuyishwa - futhi kungakhomba ukuthi kungani ngichithe isikhathi esiningi nencwadi. UMark wayenemininingwane engakholeki kangangoba ngaze ngaphoqeleka ukuthi ngibheke imininingwane emikhulu futhi ngiziba isibhamu lapha nalaphaya.
Isiphetho sesibili sencwadi ukuthi Abantu ngabangathembekile (uma kungenjalo ikakhulukazi abangahlobene) nofakazi. Kodwa-ke, esahlukweni esifanayo lapho uMark ebeka khona lesi siphetho, wadubula 'uGeorge onelukuluku' nokunqoba ukhetho ngo-2004 nguGeorge Bush. Ikolishi lezokhetho bekuyisinqumo esihle esenziwe okhokho baleli lizwe ukuqinisekisa ukuthi ivoti elidumile alenzi njalo umongameli futhi likhuluma nokukhathazeka kukaMark mayelana nokuziphatha, ubungozi nemivuzo ehambisana nokucabanga komhlambi.
Ukube i-United States ibinokhetho oludumile olwalunquma ubumongameli, i-90% yase-United States ibizosala ngemuva ngenkathi abangane bethu eWashington benaka kuphela amadolobha amakhulu. Ikolishi lokhetho linikeza ibhalansi edinga ukuthi uhulumeni wethu anake okungaphezu kweningi nje… kufanele anake izifundazwe. Impela ukhetho lwanqotshwa eFlorida nase-Ohio, kepha ngaphandle kwekolishi lezokhetho, lezo zifundazwe bezingeke zibe nezwi okhethweni.
Ngikholwa ukuthi incwadi kaMark ibingasizakala kangcono ukube ibidingida ukulingana kwezidingo zokuvota ezimele zase-United States nokuthi ingeza kanjani “kwi-American Dream” ngokunikeza wonke umuntu ilungelo lokuphishekela injabulo, hhayi nje kuphela izifunda ezinabantu abaningi.
Esinye isibhamu engisibonile encwadini bekulesi ngasekupheleni,
manje sesiyazi ukuthi umhlaba ufana nebhola, okuyiwona maphakathi nesimiso sethu sonozungezilanga njengoba iSonto LamaRoma lake lafundisa… ”
Vele iSonto LamaRoma lakufundisa lokho! Kwakuyinkolelo evamile ngaleso sikhathi futhi kwakudingeka iphikiswe. Lokho kuthatha isikhathi nokuthi kwenzeka nini, isayensi yabhalwa kabusha.
Isiphetho 4 sikhuluma ngokuthobeka ngokwengeziwe nokukhuluma nomuntu ngamunye. Kungani uMark akhuluma nge Church ngemizwa yakhe? Kwakunendaba yini ukuthi kwakuyiSonto? Kulabo bantu abakubonayo ukubaluleka kwamaBandla namuhla namakhulu eminyaka adlule, sonke kufanele sazi ukuthi, ngamaphutha alo nokungazi, iSonto lakha isisekelo sezikole zethu zamanje. Njengamabandla asendulo, ngokuzayo sizothola ukuthi sifunda izinto namuhla ezingalungile njengoba zibhalwe yizifundiswa zethu ezihlakaniphe kakhulu. Kufanele sithobeke kakhudlwana.
Okugoqwe kuzo zombili ezepolitiki nezeMfundo ukuqonda kwethu iMvelo. UMark uphawula ngokungathi yisiphetho esibekiwe sokuthi imboni ka-Oyili idala umonakalo emvelweni. Lokhu kubhalisela 'Umhlambi'. Eqinisweni, kuningi ukungabaza emphakathini wesayensi ukuthi lokhu kunjalo nhlobo.
Ukuthatha uhlangothi ngakunye kwalezi zindawo esikhundleni sokutadisha ngempela isayensi yokuthi zithinteka kanjani kuyinkinga futhi kudinga ukuhlaziywa ngemininingwane eminingi njengoba kwenza uMark nazo zonke ezinye izihloko ezisencwadini. Nakulokhu futhi, ngithole le ncwadi ibaluleke kakhulu - kepha ngicabanga ukuthi uMark ubengabheka ngendlela ehlakaniphile kuzo zonke lezi zindawo futhi abe nomthelela omkhulu.
Tags: ibhukuushintshoumhlambiukuziphatha komhlambiukucabanga komhlambimaka indlebeukuziphatha ngobuningi
Nov 4, 2007 ngo-5: 59 PM
Sicela ugcine umqondo ovulekile lapho ucabanga ngalezi zinto ezintathu. Bobathathu basolwa ngokwezepolitiki futhi kungaholela ekutheni uthathe isinqumo sokuyeka ukufunda ibhulogi yami. Angithembi!
Angiyena umlandeli kaBush, ikakhulukazi maqondana nokuguguleka kwamalungelo ethu oMthethosisekelo. Lapho silahlekelwa yinkululeko enjengale, kuyinkolelo yami ukuthi amaphekula abe nempumelelo.
Angiyena futhi umlandeli wenkolo ehleliwe - angicabangi ukuthi uzothola ivesi elilodwa eBhayibhelini elibiza amaBandla amakhulu abiza izigidi zamadola futhi ashukumise ukudayiswa kwezepolitiki. Kepha ngiyakholelwa ukuthi amaBandla enza umehluko omkhulu emphakathini. Ngiwubonile umehluko mathupha, izigidi zamadola eminikelweni eya emiphakathini nakubantu abayidingayo.
Angiyena umuntu wezemvelo, kepha ngifuna ukusibona siyeka ukugcwalisa imfucumfucu futhi ngokuya ngamanye amazwe ngamafutha ethu. Ukusiza imvelo kuyasiza kulezo zimbangela, ngakho-ke ngivame ukuncika kulolo hlangothi.
Nov 5, 2007 ngo-9: 05 AM
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, uDoug. Ngizithola ngingasakwazi ukulalela abaphathi bezinkulumo zomsakazo / ze-TV (zombili ngakwesokudla nangakwesobunxele) b / c abakwazi ukubheka izinhlangothi zombili ngaphambi kokwenza isinqumo. Kufana nomcabango nophenyo luthathe isihlalo sangemuva ekumuncekeni kolwazi kanye nokugxumela ezinqumweni ezisuselwa kwimizwelo esiyicabange ngokususelwa kokuhlangenwe nakho kwethu. Ngicabanga ukuthi noma ngubani emehlweni omphakathi, noma ngubani onikezwe izwi lomphakathi, ababhali, abahleli, izindaba, sonke, ngisho nalabo ababhulogi, banesibopho emphakathini sokuletha izimpikiswano ezinengqondo nolwazi. Angihambisani nawe ngaso sonke isikhathi, kepha ngihlala ngibona sengathi ukwenza kahle lokhu. Kungakho ngiqhubeka nokufunda. . .
Ngihlala ngikhunjuzwa kamuva nje ngento engiyizwe ngisemncane kakhulu, “Zonke izinto ngokulinganisela. . . ”
Nov 4, 2007 ngo-10: 49 PM
UDoug, okuthunyelwe okuhle. Ukuhlola okuthe xaxa (kodwa hhayi kokulinganisela) ekubukeni kwesimo esifanayo, ngaphandle kwezithiyo zezenkolo nezepolitiki, bheka i- "The Wisdom of Crowds" kaJames Surowiecki. Kwakungenye yezincwadi zokuqala "ezimakethe zokuqagela" okungekhona lokho uHerd akutholayo, kodwa kuhlobene nakanjani. Isisekelo esiyisisekelo ukuthi ungasungula "imakethe", uthi, okhethweni luka-2008 futhi ube nabantu "abathenga" izinkontileka zokukhetha kulabo abacabanga ukuthi bazowina. Uma imiphumela yabo iphumelela kunendlela ethile yesinxephezelo. Isixuku sihlakaniphe ukwedlula noma yisiphi isazi noma iqembu elincane futhi sinamandla okubikezela anamandla kune-poll. Kukhona isifundo e-Univ. wase-Iowa owenza lokhu okhethweni lukamongameli futhi ngikhohlwa ukuthi kubuyela emuva kangakanani, kepha angicabangi ukuthi balahlekelwe okukodwa okwamanje!